Soo dejisan Vine 5.42.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Vine
Canabka – macmiil ah shabakad bulshada si ay u abuuraan oo ay isku dhaafsadaan gaaban videos. Software ayaa awood u nalugu users kale ama videos ee channels kala duwan, u arkaan feed warka, si aad saaxiibo ku dari users iyo faallo videos. Canabka kuu ogolaanayaa inaad si ay u qoraan gaaban videos adigoo gujinaya oo haysta fartaada shaashadda qalab iyo joojiyo rikoorka ay iska farta this video abuuraa xiiso leh oo jajab ka duwan. Software ayaa awood u siineysaa inay u astaysto gaadhsiin, asturnaanta profile iyo midabka interface. Canabka sidoo kale macaamila shabakadaha bulshada caan ah sida Facebook iyo Twitter.
Records, itusi iyo is dhaafsi ah video clips
Awoodda subscribe to waddooyin kala duwan
View ah quudintooda warka
Dhexgalka Facebook iyo Twitter
Soo dejisan Vine
Faallo ku saabsan Vine
Vine Xirfadaha la xiriira
Amazon – waa dalab leh noocyo kala duwan oo ah alaabooyin iyo badeecado adeegga adeegga caanka ah ee Amazon. Software-ku wuxuu awood u siinayaa soo dejinta bilaashka ah ee barnaamijyo iyo ciyaaro badan.
eBay – softiweer lagu maareeyo adeegga ugu caansan iibka iyo iibinta alaabada kala duwan. Software-ka wuxuu adeegsadaa nidaam raadin oo ku habboon badeecada iyo adeegyada oo loo qeybiyay heerar badan.
APUS Launcher – hab dhakhso iyo fududaan oo lagu hagaajiyo desktop-ka. Software-ka wuxuu bixiyaa shaqada ugu dhakhsaha badan ee aaladda wuxuuna ka kooban yahay dalabyo waxtar leh.